China 5.0-ton Forklift Iilori yoMvelisi kunye noMthengisi | UWilk
WIK 5.0-itoni Forklift Iilori
Ukucwangciswa okumiselweyo: Chaoyang 6102 injini yedizili
Ukuhanjiswa kolwelo kumbindi nakumazantsi
Iifreyimu ezimbini zeminyango emithathu yemitha
Amavili amatsha afanelekileyo
Ibhokisi yezixhobo / ipakethe yenkonzo
Umsebenzi wentshayelelo: indibano ye-injini yokuphuma kwelanga ,, amandla, ukhuselo lokusingqongileyo
Ukuhanjiswa kwe-South Central, egudileyo, ukusebenza
I-Linde steering, i-hydraulic cylinder, i-SMC yokwambathisa ngokuthe cwaka
Hongchang ezikumgangatho ophezulu isakhelo ucango intsimbi, hayi, deform
Entsha, enxibe eyomeleleyo, eyothusayo,
Uqwalaselo olukhethiweyo: Injini yeChaoyang, injini yeenkuni
Ngenisa iinjini zeIslington
Ukuhambisa ulwelo ngesandla, ukuhambisa umbane ngombane
Amacandelo amabini i-3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m isakhelo somnyango
Amacandelo amabini 3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m isakhelo somnyango sasimahla esipheleleyo
Amacandelo amathathu 4.5 m, 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 m isakhelo somnyango simahla
Itayara entsha evuthayo / itayara eqinileyo, ukuphuma kwegesi ukuphuma kwegesi / itayara eqinileyo, ukhuseleko lwendalo
Ngokwempahla eyahlukeneyo, indibano yezinto ezahlukileyo, ezinje ngokutshintsha icala, ikliphu yebhegi yomqhaphu
Paper roll umboniso, iiklip ibhokisi, njl
WIK Iiparamitha eziphambili zobugcisa
Umzekelo. WIK50 Umzekelo. WIK50
Uhlobo lwamandla Idizili. Ubude obugcweleyo akukho foloko mm 3430。
Ikaliwe umthwalo kg 5000。 Ububanzi obugcweleyo mm 2235。
Umthwalo weziko mm 600。 Ukuphakama okuphezulu okuphezulu kwemfoloko (kunye nokugcina ishelfu) 4380。
Ukuphakamisa ukuphakama mm 3000。 Isakhelo somnyango ubude bomgangatho 2500。
Ukuphakama simahla ukuphakama mm 205。 Ivili langaphambili. 8.25-15-14PR
Ubungakanani befolokhwe mm 1220 × 150x60 Amavili angasemva 8.25-15-14PR
Isakhelo somnyango sitsheke phambili / 6/12。 Iivili mm mm 2250。
Ubuncinci bokujika irediyamu mm 3250。 Umgama wevili phambi kwevili / ngevili elingasemva mm 1470/1700。
Ubuncinci be-angle engqonge ububanzi besiteshi 5500。 Self-ubunzima akukho umthwalo Kg 7980。
Ubuncinci be-angle-angle angle ububanzi mm 2960。 Umbane webhetri / V / Ah (12/80) × 2
Ubuncinane bokucoca umhlaba mm 200。 Imodeli yenjini cY6102BG6
Ukuphakama kwesakhelo phezulu mm 2469。 Ikaliwe amandla kw / rpm 81/2500。
Ngaphambili ngaphezulu kwe-mm 610。 Ikaliwe torque NM / ngomzuzu 353/1700。
Esona santya siphezulu sohambo sigcwele km / h 26。 Bodle X yokuhamba mm 102x118
Esona santya siphezulu siphakamileyo sigcwele mm / m420 400。 Inani leesilinda 6。
Ukutsalwa okuphezulu kugcwele iKN 51.4。 Ukufuduswa L 5.785。
Ubungakanani bokunyuka okuphezulu% 20。 Umthamo wetanki yamafutha L 120。
Ubude obugcweleyo ngemfoloko mm 4650。 Uxinzelelo lokusebenza Mpa 20。
Imisebenzi ye-forklift inokunciphisa igalelo labasebenzi kunye nokuqina kwabasebenzi, ukuphucula ukusebenza kakuhle, kunye nokusebenzisa ngokupheleleyo indawo yokuma kweekhabhathi, iinqwelo kunye neendawo zokugcina iimpahla. Ikwanciphisa ixesha lokusebenza kokulayisha, ukothula, ukuphatha kunye nokubeka impahla, ukukhawulezisa ukuhanjiswa kwezithuthi kunye neenqanawa, kunye nokuphucula inqanaba lokhuseleko lomsebenzi.
Iifolokhwe zomlilo zangaphakathi zisebenzisa idizili, ipetroli okanye iinjini zegesi yepetroleum ukunyibilika. Zinzima kwaye zizimele. Zisetyenziswa ikakhulu kwiindawo zokusebenza ezinamathambeka amakhulu, iindlela ezingalinganiyo, izinto ezinzima kunye nemozulu embi.
Makhe ndazise inkqubo yeradiyetha yento yokutsha komlilo yangaphakathi.
Inkqubo yeradiyetha ibandakanya iiradiyetha kunye nefestile, njl njl. Iradiyetha ikwabizwa ngokuba yitanki lamanzi, enamalungu amathathu: igumbi lokungena lamanzi, igumbi lokuphuma kwamanzi kunye nomsinga wobushushu. Ulwelo olupholisayo (amanzi) luhamba kumbindi weradiyetha, kwaye umoya udlula ngaphandle kwesiseko serediyetha, ukuze ubushushu obufunxwe ngamanzi apholisayo avela kwinjini yangaphakathi yokutsha bunokudluliselwa kumoya ongaphandle, ukuze ubushushu bamanzi okupholisa bube nakho yehliswe ukuze ijikeleze kwakhona. Umsebenzi wefestile yangaphambili kukungenisa umoya ngaphakathi ngefeni ukuba idlule kwiradiyetha ukuphucula ukusebenza kwe fan.
Iifolokhwe zomlilo zangaphakathi zisebenzisa idizili, ipetroli, i-petroleum gas okanye i-injini yegesi yendalo njengamandla, enomthwalo we-1.2 ukuya kwi-8.0 yeetoni, kunye nobubanzi besitishi esisebenzayo se-3.5 ukuya kwi-5.0 yeemitha. Ukujonga ukukhutshwa kwefisi kunye nengxolo, zihlala zisetyenziselwa ngaphandle, iindibano zocweyo okanye ezinye iindawo ezingenazo iimfuno ezizodwa zokukhupha umbane kunye nengxolo. Ngenxa yokufumaneka kokuzaliswa kwe-petroli, inokuqonda ukusebenza okuqhubekayo kwexesha elide kwaye inokusebenza kwiindawo ezinobunzima (njengeentsuku zemvula).
Ukuba impompo yamanzi ayisebenzi kakuhle okanye umgama osembindini phakathi kwevili lokuqhuba kunye nevili eliqhutywayo le-fan pulley aluchanekanga, ibhanti liya kuba likhululekile kwaye limtyibilizi, ukuze isantya sevili eliqhutywa lihle, isantya Impompo yamanzi iya kuhla, kwaye inqanaba lokumpompoza kwempompo yamanzi liza kwehla; Indlela ivaliwe kwaye ukuhamba kwamanzi akululanga; okanye ukungasebenzi kakuhle kwe-thermostat kunye nokuhamba kwamanzi kuyo yonke inkqubo kuyekiwe; ezi zinto zingasentla ziya kubangela ukuba ubushushu bamanzi bangaphakathi benjini yokutsha ngaphakathi bunyuke, kubangele ukuba inkqubo yokupholisa ibashushu ngokugqithisileyo. Ukongeza, i-injini yokutsha yangaphakathi iya kuyitshisa inkqubo yokupholisa ngenxa yezinye izinto ezingalunganga ezifana nexesha lokutshaya elingalunganga.
1. Iilori ze-Forklift zincinci ngobukhulu, kodwa zinokuzinza okuhle kwaye zilungele ukurhuqa. Zisetyenziselwa ixesha elingenamda. Ngokuqhelekileyo zisetyenziselwa ngaphandle. Xa kuthelekiswa neinjini zepetroli, iinjini zedizili zinamandla angcono (kulula ukuba shushu kakhulu kwizantya eziphantsi, amandla asekethe efutshane, kunye nokusebenza kwexesha elide), kunye neendleko eziphantsi zepetroli. Nangona kunjalo, banokungcangcazela okukhulu, ingxolo enkulu, ukufuduka okukhulu, ukuzithemba, kunye nexabiso eliphezulu. Umthwalo unokuba ukusuka kwiitoni eziyi-0.5 ukuya kwiitoni ezingama-45.
2. Iilori ze-Forklift zincinci ngobukhulu, kodwa zinokuzinza okuhle kwaye zilungele ukurhuqa. Zisetyenziselwa ixesha elingenamda kwaye zihlala zisetyenziswa ngaphandle. Iinjini zepetroli zinembonakalo encinci, uhlengahlengiso olukhanyayo, amandla emveliso aphezulu, ingxolo yokusebenza ephantsi kunye nongcangcazelo, kunye nexabiso eliphantsi. Nangona kunjalo, iinjini zepetroli zinokubanakho amandla okujikeleza okufutshane, ukusebenza kwexesha elide, kunye neendleko eziphantsi zepetroli. Umthwalo unokuba ziitoni eziyi-0.5 ukuya kwiitoni ezi-4,5.
3. Umsebenzi olinganiselayo womthwalo onamafutha we-petroleum gas forklift (igama elipheleleyo le-LPG) sisixhobo semithwalo esinzima esinezixhobo ezixhotyiswe ngesixhobo sokutshintsha igesi yepetroleum, esincitshiswe saya kwi-LPG forklift, enokusetyenziselwa ukutshintshela phakathi kwepetroli kunye nokunyibilikiswa irhasi ngotshintsho. Uncedo lwesibini lwee-forklifts ze-LPG kukuba igesi yokukhupha ilungile, kwaye i-gas yenkunkuma ye-hydrolyzed carbon (CO) ingaphezulu kakhulu kweinjini zepetroli. Ixabiso lepetroli liphantsi (i-15KG yegesi engamanzi ilingana neelitha ezingama-20 zepetroli), kwaye inikwe umda kwimisebenzi yangaphakathi ngokungakhathalelwa okusingqongileyo.
Egqithileyo 7.0-iitoni Forklift Iilori
Okulandelayo: I-5.0 yeetoni yedizili engekho mgodini
I-WIK30Ukuphakanyiswa kwamafutha okubasa